Isaaq Newton(Af Ingiriis : Isaac Newton) wuxuuna magac munaasabeedkaka Sir, (4 Janaayo 1643 - 31 Maarso 1727), wuxuu ku xeel dheeraa Fiisigiska , Xisaabaadka iyo Cilmiga Xidigiska, waxa uuna ka tirsan yahay dadka caalamka raadka ku yeeshay.
Yaraantii Isxaaq[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Waxa uu dhashay Isxaaq Newton sanadii 4-4 1643 waxa uu dhashay dhimashaddii abihii kadib sadax bilood. Waxa uu ahaa nin aad u dhuuban.waayo mauu dhalan xiligii dhalashada ee caadiga ahayd. kadib markii uu isxaaq gaadhay sadex jir ayay hooyadii guursatay.nin waxaanay aaday ninkaa cusub ee aya guursatay waxaanay isxaaq kagatagtay hooyadeed.(Margery Ayscough) Ishaaq wuu necbaa hooyadii isga oo kunacay ninkaas ay guursatay.taasna waxa uu kaga waramay buug uu ugu magac daray khaladadii aan galay xiligii ay dadaydu kayrayad.19.kitaabkaas oo ad caan unoqday. Intii udhaxaysay dadiisa 12 ilaa 17 waxa uu wax kabartay iskoolka The King's School taas oo ilaaiminka uu kamuuqdo saxeexiisii uu barigaa kudhigay mid kamida daaqadaha iskoolkaas.
Kadib wuu kabaxay madrisadaa wxaanuu dib ugulaabtay tuuladiisii Woolsthorpe-by-Colsterworth sanadii 1659 halkaasoo hooyadii marlabaad ay wayday ninkeedii oo uu kadhintay ninkii labaad ee ay guursatay. Hooyadii kadib waxa ay aad ujeclayd in uu noqdo beero fale. Isguna aad ayuu u necbaa beeraha. Kadib waxaa aad u jeclaystay nin ahaa bare oo katirsanaa dugsiga boqorka kaas oo Isxaaq hooyadii kuqanciyay in ay kudarto dugsiga boqorka kadib waxa uu kubiiray iskoolaas waxa uu noqday arday aad u fiican sanadii 1661 ayuu isxaaq waxa uu ku biiray jaamacada kamberag isga oo markaas kusifaysnaa arday caawiye ah tas oo kasaaciday in uu helao khibrado aad ubadan.
Kadib markii uu isxaaq qaatay shahaadadii jaamacada. ayaa sikumeelgaadha wxaa looxidhay jaamacadii. Inkasta oo aanuu isagu caan kahayan jaamacada jaamacada waxaa looxidhay kadib markii uu faafay xanuunakadaacuunku taas oo labadii sano ee kuxigay xiligii jaamacada laxidhay uu isxaaq bilaabay in uu gurigiisa hoostiisa kusameeyo tijaabooyin waxaa uu horumar kagaadhay arigtiyihiisii. Sida qaanuunkii aragtiyaha, iyo xisaabinta cvilmiga falaga iyo xidigska iyo qaanuunka laguqeexo soojiidashada.
Guulihii uu kagaadhay cilmiga Xisaabaadka[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Saxa ay aaminsayihiin badi raga taariikhda baadha ee casrigani in isxaaq iyo ninka la odhanjiray Leibniz ay hore u mariyeen amaba ay caalamka tuseen xisaabta looyaqaano infinitesimal ee lagu qiyaaso waxyaabaha aadka u yaryar.
Baaraha Kitaabka Quduuska ah[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Isaga oo loo tixgeliyey mid ka mid ah caqli-yaqaannada sayniska ee ugu weyn ee abid, wuxuu ixtiraamay oo si taxadar leh u baaray Kitaabka quduska.
In ka badan 3,000 oo sano ka hor saynisyahankii caanka ahaa Sir Isaac Newton wuxuu sharraxay in meerayaasha lagu hayo meel bannaan oo cufisjiid ah, Baybalku wuxuu si gabay ah u sheegay in ‘Oo dhulkana wuxuu ka laalaadshaa wax aan waxba ahayn.’ (Ayuub 26:7)
Wuxuu ogaaday in Kitaabka Quduuska ahi qorayo: Ilaahay waa mid. Mid la mid ahna ma jiro. Ciise waa nebigii Ilaah, ma ahan Ilaaha Qaadirka ah. Ilaahay wuu mamnuucay sanam caabudid. Binuʼaadanku waxay arki doonaan maalin la xisaabin doono. Kuwii dhintay in la tirin karin baa Jannada lugu soo nooleyn doonaa. Dhowaan dunida jannay noqon doontaa.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Isxaaq_Newton&oldid=222851"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 2 Nofeembar 2021, marka ee eheed 20:10.